kkchha.com:: दिल्लीमा नेपालको बेईज्जत सीताको कारण हैन यो त प्रचण्डसँगै गएका सहयोगीले गर्दा भएको हो ।
दिल्लीमा नेपालको बेईज्जत सीताको कारण हैन यो त प्रचण्डसँगै गएका सहयोगीले गर्दा भएको हो ।
By प्रकाश धिताल September 17, 2016
केके छ डट कम परिवार – काठमाण्डौ – असोज ०१
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हात मिलाइरहँदा प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको पोजिसनको चर्को आलोचना भयो। स्वागतको क्रममा सीताको पोजिसन चेन्ज भयो जसका कारण सीताले आलोचना खेप्नु पर्यो । भारतीय राष्ट्रपति भवनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सीता नेपाली झण्डा फहराउँदै पुगे। जब गाडी रोकियो, दाहिने तर्फबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड झरे र मोदीसँग हात मिलाए।प्रधानमन्त्री पत्नी सीता गाडीको देब्रेतर्फबाट बाहिरिइन् र गाडीको पछाडिको भागबाट आएर मोदीलाई भेटिन्। मोदीले नमस्कार गर्दै गर्दा प्रचण्ड पत्नी सीताले भने हात दिइन्। राष्ट्रपति भवनमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरुले फोटो खिच्न सहजता प्रदान गर्न सीतालाई आग्रह गरे। उनी अगाडिबाट हटेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको साइडमा उभिनुको साटो मोदी भएको साइडतर्फ पुगिन् ।
जसका कारण उनको पोजिसन चेन्ज भयो। हो यहि कुरालाइ लिएर उनको कोणकोणबाट मिडियामा चर्को आलोचना भयो । सामाजिक सञ्जालहरुमा उनको पोजिसनलाई लिएर बडो ढोल पिटाउने काम भयो। त्यसो त उनले हाँत बाँधेर बसेको विषयलाई लिएर पनि आलोचना भयो। हुनसक्छ सीता खासै शिक्षित नहुनाले पनि उनको पोज नमिलेको होला । तर यो कुरालाइ अहिले भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपालको बेईजत भयो भनेर सामाजिक संजालमा भाइरल बनाइए को छ। अझ बडो रमाइलो कुरात के छ भने परराष्ट्रका अधिकारीहरुले सितालाइ सिकाउनु त कता हो कता नाक खुम्च्याउन पुगे । उ बेलामा रामको परिक्षा लिने सिताले नै अग्नी परिक्षा दिनु पर्ने । उनी पूर्व राजकुमारी हैनन् । सिकाउनु परो नी । फेरी जे भयो त्यो सीतालाई मन नपरेको हुनपनि त सक्छ । सिताले जानिन त नजानेसि कस्को के लाग्छ ।
अर्को कुरा दाहालसँगै गएका तेत्रा सहयोगीहरु के रमिता हेरेर बसे ? के उनिहरुको दिमाग थिएन ? छेउमा गएर किन सिकाउन सकेनन ? अनि सीतालाइ भन्ने आँट किन गरेनन ? के यो सिताका मात्र गल्ति हो । उनि पतिको पछि लागिन होला उनले पतिको पछि लागेपछि पतिले जे गर्छन त्यसै गर्नुपर्ने तर भएन । जानेर हो नजानेर हो । एउटा कुरासत्य हो के हो भने पति पत्निबीच एक अर्कामा आन्तरिक कुरामा बुझाबुझ हुन्दैन भने संगै हिँडदा जो होहिको पनि यस्तै हालत हुन्छ । तर यहाँ एकलौटि रुपमा उनै सिताको मात्र आलोचनाभयो । प्रधानमन्त्री पत्नी उभिएर देशको इज्जत फालिन, असभ्यता देखाईन भनी ढोल पिटनेहरुको लहरै चल्यो । तर याद गर्नुहोस मित्रहरु जस्ले जे गरेपनि यो कुरालाइ भाइरल बनाएर तपाईहरुले हजारौं हजार गुणा बेज्जतीपुर्ण काम गर्नु भएको छ । जब सैद्धान्तिक तर्क, विचार र दृष्टिकोणमा हार खाइन्छ नि हो तब विपक्षी मान्छे खुट्टा कहाँ थियो, हात कस्तो थियो, शिर बाङ्गो थियो कि झुकेको थियो , कस्तो लुगाा लगाएको छ , किन हासेन भन्ने पट्टि लाग्छन् । सैदान्तिक रुपमा विचलित र राष्ट्र दलाली गर्ने महत्वकांक्षा मा योजना वनिरहेको परिस्थितिमा सार्वजनिक देखावट मा गरिने औपचारिक रुप का कार्यक्रमहरुमा हतोत्साहित हुनु स्वभाविक पनि हो। तर जे जस्तो भएपनि मलाइ लाग्छ यो बेइजत प्रधानमन्त्री पत्नी कारण होइन। यो त सँगै गएका सहयोगि अनि पत्रकार र सँगै भएका अन्य स्याल हरुको कारण यस्तो भएको हो ।
सगैँ गएका परराष्ट्रका अधिकरी ले भन्ने आँट किन गरेन यसो गर्नु हुन्न भनेर । नजानेको कुरा नसिकाउने भए ,मर्या्दित नबनाउने भए के प्रचण्ड को कुन्नी के मा झिँगा भन्केला र धपाउन भनेर गाकाहुन रुअर्को कुरा दाहालकि पत्निको फोटोलाइ लिएर मोदीले हिजो अस्ती सम्म बुद्ध हाम्रो हो भन्थ्यो अब यसरी फोटो खिचेसी भोली बाट सिता नि हाम्रै हो भन्न बेर छैन भनेर कमेन्टहरु गर्नेले किन महिलाको यस्तो अपमन गरे रु यो एक महिलाको अपमान हैन र ? शिष्टाचार नसिकाएर देशकै बेइज्जत गराउने अधिकारी असल अनि भाँति नपुर्याउने प्रधानमन्त्री पत्नी सीता मात्रै खराव देख्ने आँखाको उपचार गर्नुपर्छ । महिला शसक्तिकरणका कुरा गर्नेले पनि क्रान्तिकारीले घरकै महिलालाई ढंग सिकाएनछन भन्ने गतिलो उदहारण पनि होे ।